ပ်ုဏင့်ဆာ ဍေ ပ်ုဆုအ်ှဆံင်းအ, Sault Sainte Marie, ON (2021)
ဆ်ုဆာ့ဆ်ုသာဘါ် ဆျုဆာ့ဆျုသာၜျါ (Asthma)
Thank you "like" and "follow"
Lots of contents coming up in 2021
ယျုလဝျပြးလငျ ယျုထငျးကြံင်္ငျိဆျုလဝျေခငျးဖ္ကံငျ့ လျုယှငျဆျုခ္ကါငျလျုခဝျ့
I am sharing my educational experience in Shaw Karen language.
Name: Eh Sue Kaw (Eh Ku Kaw)
Name of School: Laurentian University (Sault College Campus)
ဆ်ုဆာ့သာပိင်ပုဂ်သာမဲဆ်ုကဲထင်းထံင်ဍးဆ်ုလင်သာမဲဟှံင်အ်ုလင်ခါင့် (Post-Traumatic Stress Disorder)
ဆ်ုဆာ့သာပိင်ပုဂ်သာမဲဆ်ုကဲထင်းထံင်ဍးဆ်ုလင်သာမဲဟှံင်အ်ုလင်ခါင့် ဆျုဆာ့သာပိငျပုဂျသာမဲဆျုကဲထငျးထံင်္ငျိဍးၜးဆျုလငျသာမဲဍ္ဎံငျအျုလငျခါငျ့ (Post-Traumatic Stress Disorder)
ဆ်ုသာမဲသာဖုါင်ထြိုင့်အ်ုဏါင်း (Panic Disorder)
ဆ်ုသာမဲသာဖုါင်ထြိုင့်အ်ုဏါင်း (ဆျုသာမဲသာဖ္ကါငျဆျုထွိုငျ့အျုဍ္ဍါငျး) (Panic Disorder)
ဆ်ုခေါဝ်.ဆ်ုဝဝ် အးထြိုင့်အ်ုဏါင်း (Generalized Anxiety Disorder)
ဖေ့စ် ဍေ ဆ်ုဟှင်မိုင့် အ်ုဆုပ်ုယောတ်
ဖစျေ့ ဍေ ဆျုဍ္ဎငျမိုငျ့ အျုဆျုပျုယောတျ
(Clarification of Purpose of Page and Videos)
တုပျကှေးရာသီရောကျလာတာနဲ့ COVID-19 နဲ့တုပျကှေးရောဂါ လက်ခဏာတှကေို မရောမိအောငျ ခှဲခွားသိထားဖို့လိုပါတယျ။ ဒီရောဂါလက်ခဏာ ၃ မြိုးကိုတှပွေီ့ဆိုရငျတော့ ဒါဟာရိုးရိုးတုပျကှေးမဟုတျဘဲ COVID-19 ဖွဈဖို့ မြားပါတယျ။
၁။ အနံ့၊ အရသာပြောကျခွငျး
၂။ မကျြလုံးနီခွငျး၊ ဖူးယောငျခွငျး
ဒါပမေယျ့ သတိထားရမှာက COVID-19 ရောဂါပိုးရှိနသေူအမြားစုမှာ ဘာရောဂါလက်ခဏာမှ မပွတတျကွပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိဆိုတာ ဆေးစဈကွညျ့မှသာလြှငျအတိအကပြွောနိုငျမှာပါ။
သငျ့မိတျဆှနေဲ့ မိသားစုဝငျတှကေို ကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ဒီအခကျြအလကျတှမြှေဝလေိုကျပါ။
ပ်ုဏင့်ဆာ ဍေ ပ်ုဆုအ်ှဆံင်းအ်ှခုါင့်'s cover photo
ဍ္ဍျုအေၜးသာ သီးယာ့ လျုသဲုးဆိုငျ့ဆျုဆာ့ အန်တရာယျ့ အျှယှးလဲ ဍ္ဍျှ မာယောင်္ဝျိ
It's better to know - during world diabetes day take two minutes to find out if you are at risk of Type2diabetes.
Take the test: http://bit.ly/2CLa1e8
ဖ္ကုံသာယှာလျုဍ္ဎာဍ္ဍျှ လောဝျ့ဝေ့ ဆျုမီ့ ၇ နာဍီ ထံငျလျု ၉ နာဍီ
လျုခ္ကုဂျမီ့ဍျာ ၆ နာဍီဍ္ဍျှ ပျုထုကျခှိကျ ဆျုအဝျ ဆျုထီ့ဆျုနံငျ့ လျုအျုပါ့ ဍေ ကာဖီနျဓါတျ caffeine လျုဖး
လျုခ္ကုဂျမီ့ဍျာ ၂ နာဍီဍ္ဍျှ ပျုထုကျခှိကျ မူ့ယှာဆျုဍ္ဎယျထငျးဍ္ဎယျလငျသယျလျုဖး
လျုခ္ကုဂျမီ့ဍာ ၁ နာဍီဍ္ဍျှ ပျုထုကျခှိကျ ဆျုယောဝျဖိုငျဆျု လျုဖုင်္ငျိသယျ၊ ခငျဖြူးထျုဖိုငျသယျလျုဖး
ဟှုဂ်ဖုင့်ဆာ့ (Abdominal Pain)
ဟှုဂ်ဖုင့်ဆာ့ /ဍ္ဎုဂျဖုငျ့ဆာ့ (Abdominal Pain)
ဆ်ုဆာ့ဃှာ.နုက်လင်လ်ုဏာ.ကူဖိုင် (Otitis Media)
ခိုရိုဏ်ုရီသဲုးလေဝ်ကုံင်ဆ်ုဆာ့ (Coronary Artery Disease (CAD)) - Part (3)(ကိုရိုနရီသွေး လွတ်ကြောရောဂါ)
ဆ်ုဆာ့ယိုဝ်သီးဆြာ့သယ်သီးယာ့ပ်ုသှေ်လဲ။ ဆ်ုဘျေင်ပ်ုသှေ်လဲ။ ဘးဝေင်ပွယ်ပ်ုဍင်ပ်ုသှေ်လဲ။
ဆ်ုဆာ့ခိုရိုနာဗါင်းရာ့ Novel Coronavirus Disease (COVID-19)
ဆ်ုဆာ့ခိုရိုနာဗါင်းရာ့ Novel Coronavirus Disease (COVID-19) 21/03/2020
ယ်ုမုထင်း Live လ်ုဟှးယိုဝ်။ ယ်ုမုလဝ်ပျးဆ်ုဆာ့ဘးဆာင့်ဍေ ခိုရိုနာဗါင်းရာ့၊ အ်ုခါ့ ကေဟှး (8:00) လ်ုယုအှ်။ အ်ုခါ့လ်ုသာင့်ခါန်. ကေဟှဝ် (7:00).
ယျုမျုထငျး Live လျုဟှးယိုဝျ။ ယျုမျုလဝျပြးဆျုဆာ့ဘးဆာငျ့ဍေ ခိုရိုနာဗါငျးရာ့။ အခါ့ ကဟှေး (၈:၀၀)လျုယျုအျှ။ အျုခါ့လျုသာငျ့ခါနျ ကဟှေဝျ (၇:၀၀)
ခိုရိုဏ်ုရီသဲုးလေဝ်ကုံင်ဆ်ုဆာ့ (Coronary Artery Disease (CAD)) - Part (2)
(ကိုရိုနရီသွေး လွတ်ကြောရောဂါ)
A quick and dirty summary of what happens to folks when they're infected with COVID-19.
ခိုရိုဏ်ုရီသဲုးလေဝ်ကုံင်ဆ်ုဆာ့ (Coronary Artery Disease (CAD)) - Part (1)
Coronavirus (N-COVID_19) March6Update
I'll be doing regular updates on my take on the latest coronavirus developments.
FURTHER UPDATE (after I shot this vid):aStanford medical faculty member has now tested positive for COVID-19, highlighting the disproportionate risk to healthcare workers (source: email just sent by the Dean).
ဆ်ုဆာ့သဲုးဆိုင့် (Diabetes Mellitus)_Part (3) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ
ဆ်ုဆာ့သဲုးဆိုင့် ယိုဝ် ဆ်ုဘျေင်ပ်ုသှေ်လဲ။ ဆ်ုဝေင်ပွယ်ပ်ုဍင်ပ်ုသှေ်လဲ။
ဆ်ုဆာ့သဲုးဆိုင့် (Diabetes Mellitus)_Part (2) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ
ဆ်ုဆာ့သဲုးဆိုင့် (Diabetes Mellitus) - Part (1)
ဆ်ုဆာ့ဘိုဝ်သိုဝ်ခဲန်စု (အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ) (Lung Cancer) - Part (4)
ဆ်ုဆာ့ယိုဝ် ဆ်ုဘျေင်ပ်ုသှေ်လဲ။ ဆ်ုဆာ့ယိုဝ် ဘးဝေင်.ပွယ်ပ်ုဍင်ပ်ုသှေ်လဲ။
ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါလက္ခဏာများ ၊ ဆောင်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်များကို ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှတဆင့် အများသိစေရန်အတွက် ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ဆ်ုဆာ့ဘိုဝ်သိုဝ်ခဲန်စု (အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ) (Lung Cancer) - Part (3)
ဆ်ုဆာ့ခဲန်စု (ကင်ဆာရောဂါ) (Cacer)
ဆ်ုဆာ့ ဘိုဝ်သိုဝ်ခဲန်စု (အဆုတ်ကင်ဆာ) (Lung Cancer) - part (2)
- ဆ်ုဆာ့ယိုဝ် ကဲထင်းအ်ုသာလ်ုဆုဟှာင်ဏ်ှသယ်လဲ။
- ဆ်ုဆာ့ယိုဝ် အ်ုလက်ခ်ုဏာအှ် ပ်ုသှေ်လဲ။
ဆ်ုဆာ့ဘိုဝ်သိုဝ်ခဲန်စ်ု (အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ) (Lung Cancer) - Part (1)
ဆ်ုဆာ့ဘိုဝ်သိုဝ်ခဲန်စု (အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ) (Lung Cancer) - Part (1)
ဆ်ုဆာ့ဘိုဝ်သိုဝ်ခဲန်စ်ုယိုဝ်မွဲာဏ်ှလဲ။ ဆ်ုဆာ့ယိုဝ် အ်ှဃှိုဲမိင်လဲ။ ဆ်ုဆာ့ယိုဝ် အ်ှဃှိဲုဆင့်လဲ။ လ်ုခါန်.မျိုင်မာဖိုင် ဖုံဏေ၀်ဆ်ုဆာ့ယိုဝ် အှ်ဃှိဲုဟှာလဲ။ ဖုံသီ့ဍေဆ်ုဆာ့ယိုဝ်အ်ှဃှိဲုဟှာလဲ။
ဆ်ုဆာ့သဲုးဆိုင့် (ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ) (Diabetes Mellitus)
ဆ်ုဆာ့ ခဲန်စု (Cancer) (ကင်ဆာရောဂါ)
Be the first to know and let us send you an email when ပ်ုဏင့်ဆာ ဍေ ပ်ုဆုအ်ှဆံင်းအ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to ပ်ုဏင့်ဆာ ဍေ ပ်ုဆုအ်ှဆံင်းအ:
ဆ်ုဆာ့ သဲုးဆိုင့် (ဆီးချိုးသွေးချိုးရောဂါ) (Diabetes Mellitus (DM))
ဆ်ုဆာ့သာလင် (စိတ်ဓါတ်ကျရောဂါ) (Depressive Disorder)
ဆ်ုဆာ့ ထီဘီ (Tuberculosis (TB))
ဆ်ုဆာ့ လုံ.ဟှယ့်အ်ှထင်း လု အ်ုလေဝ်.ဖိုင် (kidney stone)
ဆ်ုဆာ့သုင်းယောဝ် ကဲထင်းလု ဆ်ုဆာ့ဃှာ. (ဘီ) Hepatitis (B)
ဆ်ုဆာ့ သုင်းယောဝ် (Hepatitis)
ဆ်ုဆာ့သဲုးဟှာင်.ဆံင်း (သွေးတိုးရောဂါ)
ဆ်ုအဝ်မေါတ်ထူ့ ဍေ သာဖုံးဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာလ်ုဖး
လီကုံင်က်ုထိက်ဆ်ုဆာ့ဖါယိက်ဖါထဝ့် ဍေ ဆ်ုအဝ်မေါတ်ထူ့
2030 Pie-IX, Montreal
8820 jasper av nw, Edmonton
Other Health & Wellness Websites in Sault Sainte Marie
AR Essentials & Wellness
Natashia Schwarz - Arbonne Independent Consul
128 Pointe Louise Drive
The Soul Compass: Yoga, Art and Meditation wi
Raw Potential Nutrition: Counselling and Educ
Dr. Tara Guzzo, Naturopathic Doctor & Registe
373 McNabb Street, Unit 3
644 Queen Street E.
1019 Queen Street
Peas of Mind - Cooking for Wellness
640-642 queen street east unit 1
We will notify you when anything happens in Sault Sainte Marie.